लकडाउनले गर्दा नेपालमा ह्वात्तै घट्यो जग्गाको मुल्य ! – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनले गर्दा नेपालमा ह्वात्तै घट्यो जग्गाको मुल्य !
लकडाउनले गर्दा नेपालमा ह्वात्तै घट्यो जग्गाको मुल्य !
२८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन पुरानै कायम भएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि जग्गाको नयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।कोरोना भाइरस -कोभिड-१९) ले समग्र क्षेत्रमा असर परेको भन्दै समितिले अधिकांश क्षेत्रको न्युनतम् मूल्याङ्कनमा परिवर्तन गरेको छैन । केहि क्षेत्रको थोरै बढाईएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी कोभिड-१९ का कारण यस वर्षका लागि जग्ग्ााको मूल्याङ्कन खासै परिवर्तन नभएको बताउछन् । हाल कायम मूल्यांकन पनि उचित नै भएको उनले बताए ।हरेक वर्ष जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने सीडीओ नेतृत्वको समितिमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, करदाता सेवा कार्यालयका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । सो क्षेत्रको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
भक्तपुरमा १२ हजारदेखि २४ लाखसम्म
जग्गाको न्युनतम मूल्यांकन समितिले भक्तपुर जिल्लामा प्रति आना १२ हजार १०० रुपैयाँदेखि २३ लाख ७६ हजार रुपैयाँसम्म मुल्यांकन तोकेको छ । भक्तपुरको साविक सिपाडोल गाविसको अरनिको राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरुको न्युनतम् मूल्य प्रतिआना रु.२३ लाख ७६ हजार तोकिएको छ ।सोहि क्षेत्रभित्र प्लानिङ भएको ठाउँमा पक्की बाटो भएको जग्गाहरुका लागि प्रति आना ८ लाख ७१ हजार २०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने कच्ची बाटो भएको क्षेत्रहरुमा प्रतिआना ६६ हजार ६०० देखि ७ लाख २६ हजार रुपैंयासम्म तोकिएको छ ।भक्तपुरको विभिन्न क्षेत्रहरुमा गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु प्रति आना १ लाख ८ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि २ लाख ६६ हजार २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । बाटो नभएको जग्गाको मूल्य प्रति आना १२ हजार १ सय रुपैयाँ देखि ५३ हजार ३ सयसम्म तोकिएको छ ।
उपत्यकाकै सस्तो ललितपुरमा
काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये ललितपुरका विकट क्षेत्रहरुमा जग्गाको मूल्य निकै सस्तो रहेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले देखाउछ । ३ आनाको घँडेरी किन्न काठमाडौंमा करोडौं रकम खर्चिनु पर्छ । ललितपुरको गोटीखेलमा भने प्रति आना १२ सय न्युनतम् मूल्याङ्कन भएको छ ।मालपोत कार्यालय गोटीखेल मातहतका क्षेत्रमा तोकिएको यो प्रति आना जग्गाको मुल्य काठमाडौंका होटलमा २ जनाले मासुभात खाए बराबर छ ।गोटीखेलसहित गिम्दी, चन्दनपुर, ठुला दुर्लुङ, बुखेल, मानिखेल, शंखु लगायतका गाउँका जग्गाको लागि आव ०७७/७८ को न्यूनतम मुल्याङ्कन हो यो । यो क्षेत्रमा गत आवमा पनि यही मूल्याङ्कन थियो । कोभिड-१९ ले सबै क्षेत्रमा असर गरेको भन्दै समितिले जग्गाको मूल्यांकन नबढाएको बताएको छ ।
गोटीखेल क्षेत्रमा सबभन्दा महंगो भनेको रोपनीको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ हो । पिच सडक भएका ठाउँहरुमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रति रोपनी तोकिएको छ भने अरु ठाउँमा रु.२० हजार प्रति रोपनी । यो दरले एक आनालाई १२ सय पर्छ ।ललितपुरकै लगनखेल, जावलाखेल, कुपण्डोल लगायतका क्षेत्रमा प्रति आना ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिकाको पिच सडकले छोएको क्षेत्रमा १२ लाख र बाटो नभएका जग्गाहरु आनाको ७५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । सैँबु आवासीय क्षेत्रमा भने १९ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रति आना मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
काठमाडौंमा कति पर्छ ?
काठमाडौंका पनि अधिकांश क्षेत्रको जग्ग्ााको मूल्यांकन गत आवकै कायम गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कम भयो भन्ने गुनासो आएका क्षेत्रहरुको बढाइएको छ बाँकी क्षेत्रको पहिलेकै मुल्यांकन राखिएको छ ।काठमाडौंको हनुमानढोका, रत्नपार्क, ठमेल, इन्द्रचोक, न्यूरोड, माइतिघर, दरवारमार्ग, कमलादीलगायत क्षेत्रमा प्रतिआना ६० लाख रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ ।काठमाडौंमा सस्तो भनेको दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रका जग्गा देखिएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकामा बाटो नभएको जग्गाको मूल्याङ्कनप्रति आना २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । राम्रो सडक भएको ठाउँमा भने प्रति आना ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्याङ्कन गरिएको छ ।काठमाडौं जिल्लामा सबभन्दा सस्तो जग्गा भनेको प्रति आना २५ हजार रुपैयाँ भएको छ ।
राजश्वको लागि मात्र मूलांकन !
सरकारी मूल्यांकन जति भए पनि खरिदकर्ताले त्यो मूल्यमा जग्गा पाउदैनन् । जग्गा किनबेच गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व भने यही मूल्याङ्कनअनुसार निर्धारण गरिन्छ ।ललितपुरको महाकाल गाउँपालिकामा पनि एक रोपनीको मूल्यांकन जम्मा २० हजार रुपैयामात्र छ ।गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल आफ्नो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना संक्रमण नभएको बताउँछन् । जग्गाको मूल्यांकन भने कोरोनालाई नै कारण देखाउदै गत वर्षकै कायम भएको उनले बताए ।‘तर, यो मूल्याङ्कनअनुसार जग्गा पाइँदैन’, दाहाल भन्छन्, ‘यो त राजस्व तिर्नका लागि मात्र हो ।’Onlinekhabar.com